Nnwom 91 NA-TWI - Mateo 91 MTDS | Biblica América Latina
Nnwom 91 NA-TWI - Mateo 91 MTDS
Onyankopɔn, yɛn hwɛfo
1Obiara a wobɛkɔ Awurade nkyɛn sɛ wo guankɔbea, obiara a ɔbɛhyɛ Otumfoɔ no banbɔ ase no 2 tumi ka kyerɛ no se, “Woyɛ me hwɛfo ne me guankɔbea. Woyɛ me Nyankopɔn na mewɔ wo mu ahotoso.” 3 Ɔbɛkora wo afi bɔne a ahintaw nyinaa ne ɔyarewu nyinaa ho. 4 Ɔde ne ntaban bɛkɛta wo so; ne hwɛ mu, hwee renyɛ wo. Ne nokware bɛbɔ wo ho ban. 5 Ɛnsɛ sɛ wusuro anadwo mu amanehunu anaa awia mu ɔtaa 6 anaa ɔyaredɔm a ɛba anadwo anaa amumɔyɛde a ɛsɛe ade awia ketee.
7 Apem totɔ wo nkyɛn na ɔpedu totɔ wo nifa a, wo de, ɛrenka wo. 8 W’ani nko na wode bɛhwɛ na wahu nnebɔneyɛfo asotwe. 9 Woayɛ Awurade wo hwɛfo, ɔsorosoroni no wo guankɔbea 10 enti asiane biara mma wo so, na basabasayɛ biara remmɛn w’atenae. 11 Onyankopɔn bɛma n’abɔfo abɛwɛn wo na baabiara a wobɛkɔ no, wɔabɔ wo ho ban. 12 Wobesuso wo mu wɔ soro sɛnea wo nan renhintiw, mpira. 13 Wubetiatia agyata ne awɔ, agyata a wɔn ho yɛ hu ne awɔ a wɔn ano bɔre yɛ den so.
14 Onyankopɔn se, “Megye wɔn a wɔdɔ me no nkwa, na mabɔ wɔn a wonim me sɛ Awurade no ho ban. 15 Sɛ wɔfrɛ me a, megye wɔn so; sɛ ɔhaw to wɔn a, mɛka wɔn ho. Megye wɔn na mahyɛ wɔn anuonyam. 16 Mɛma wɔn nkwa nna aware. Megye wɔn nkwa.”
NA-TWI : Nnwom 91